Paikadin'ny media sosialy: lakilen'ny fananganana paikady mahomby
Manamarina ny paikadinao amin'ny haino aman-jery sosialy manohitra an'ity lisitra fizarana 8-Point ity
Talata, May 2, 2017 Alatsinainy, May 1, 2017 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny orinasa tonga aty aminay mba hahazo fanampiana ara-tsosialy dia mijery ny media sosialy ho toy ny fantsona famoahana sy fahazoana, mametra fatratra ny fahafahan'izy ireo mampitombo ny fahatsiarovan-dry zareo ny marika, ny fahefana ary ny fiovam-po an-tserasera. Betsaka kokoa ny zavatra ao amin'ny media sosialy, ao anatin'izany ny fihainoana ny mpanjifanao sy ny mpifaninana aminao, ny fanitarana ny tamba-jotra ary ny fampitomboana ny fahefana ananan'ny olonao sy ny marikao an-tserasera. Raha mametra ny tenanao amin'ny famoahana sy fanantenanao fivarotana etsy sy eroa fotsiny ianao dia mety ho diso fanantenana.
Ny haino aman-jery sosialy dia mety ho kianja filalaovan'ny mpanjifanao fa tsy ho an'ny orinasanao. Ho an'ny orinasa iray, ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia tokony horaisina ho zava-dehibe indrindra amin'ny fandraisana andraikitra ara-barotra hafa raha te hahita valiny ianao. Na koa, tombony manokana. MDG Advertising
izany Lisitry ny lisitra 8-Point mankany amin'ny Marketing Media Sosialy avy amin'ny MDG Advertising manome fahitana bebe kokoa sy antsipiriany bebe kokoa amin'ny programa marketing ara-tsosialy ara-tsosialy voalanjalanja, ao anatin'izany:
Paikady - Ny lakilen'ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy dia ny fahaizana mampivelatra ny atiny, ny fizotrany, ny fampiroboroboana ary ny paikady fandrefesana izay mitarika ny fitiavan'ny mpampiasa haino aman-jery sosialy, ny fanajany ary ny fatokisany ny marikao. Ny faritra iray ao anatin'ity fizarana ity izay tsy resahina lava dia ny fananana paikady fivarotana sosialy lehibe izay itomboan'ny ekipan'ny varotrao sy ny fidiran'izy ireo tambajotra.
Fanaraha-maso ny sehatra sosialy - Ny famaritana ny toerana misy ny vinavinanao, ny mpanjifanao ary ny mpifaninana aminao ary ny fomba hanararaotanao ny tanjanao sy ny fahalemeny dia lafiny iray lehibe amin'ny paikady media sosialy.
Fantaro ny teknolojia - Fahatakarana tsara ny fahaizan'ny sehatra marketing ara-tsosialy ho an'ny toerana marobe, e-varotra, taranaka mitarika, fanentanana influencer, fanaraha-maso antso, famoahana sosialy, fandrefesana sosialy, famerenana famerenana, famolavolana sary sosialy, dokam-barotra amin'ny tambajotra sosialy, fanatsarana ny pejy fandraisana , filaharana sy fifehezana atiny, ary koa ny fahaizan'ny atiny ateraky ny mpampiasa (UGC).
Haino aman-jery sosialy karama - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, ary Youtube — samy manana fomba fiasa matanjaka mba hikendrena sy hampiroborobo ny atiny.
Fampivoarana atiny - Ny atiny dia ny sakafo noana lanin'ny mpihaino sy ny vondrom-piarahamonina anao. Raha tsy misy paikady atiny lehibe dia tsy hisarika ny saina sy hizara amin'ny media sosialy ianao.
Valin'ny mpanjifa (Management Reputation Online / ORM) - Ny fanaraha-maso ara-tsosialy hitantanana ny lazanao amin'ny Internet ary koa ny fanehoan-kevitra sy ny famaliana ny fifandraisana amin'ny krizy dia tsy maintsy atao ankehitriny. Ny fahaizanao mamaly sy mamaly haingana ny olana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa na ny krizy dia manome ny mpanjifa fanajana sy fahatokisan-tena mety ho very.
Fanaraha-maso sy fanombanana ny risika - Ny fizotry ny fizahana mba hiantohana ny fanarahan-dalàna sy hanalefahana ny risika dia lafiny iray lehibe amin'ny sehatra media sosialy sy ny fizotry ny haino aman-jery sosialy mahomby.
Fandrefesana - Na ny fahatsiarovan-tena, ny fandraisana andraikitra, ny fahefana, ny fihazonana, ny fiovam-po, ny fanesorana, na ny traikefa, ny paikadin'ny media sosialy rehetra dia tsy maintsy manana fitaovana ampiharina mba handrefesana tanteraka ireo mari-pamantarana lehibe momba ny paikady.
Ity ny infographic feno - aza hadino ny manamarina an'izany manohitra ny paikadinao mba hahazoana antoka fa manangana programa media sosialy mahasoa ianao.
Tags: fahefanafanentananalisitrafiovam-ponyfitadiavana mpanjifavalin'ny mpanjifaandraikitraSary torohaydokam-barotra mdgfitantanana laza malaza amin'ny Internetormhaino aman-jery sosialy karamatombonyfihazonanaatiny nizaraatiny sosialyfampahalalam-baovao sosialyfanaraha-maso ny media sosialyfanarahan-dalàna amin'ny media sosialyatiny media sosialymedia sosialy KPIhaino aman-jery sosialy marketing teknolojiamartech media sosialyfandrefesana ny media sosialynandoa vola ny media sosialyloza mety hitranga amin'ny media sosialyTetikasan'ny media sosialyhaitao amin'ny haino aman-jery sosialyfanaraha-maso ara-tsosialyfanaraha-maso ny sehatra sosialytetikaUpsellsuser experience
Douglas Karr Tuesday, May 2, 2017 Monday, May 1, 2017
Mahazo torohevitra ratsy avy amin'ireo mpivarotra lehibe ve ianao?
Marketing amin'ny Mobile Gaming indray mipy maso, ny fianarana tsara indrindra avy amin'ny mpandraharaha
1 Okt 2011 amin'ny 3:06 PM
Tsy azoko lazaina fa tsy manaiky aho. Ny ankamaroan'ny orinasa dia toa tsy manana paikadin'ny media sosialy, fa ny ankamaroan'ny orinasa dia toa tsy mitondra tena amin'ny fomba tena mahasosotra na aiza na aiza!
2 Oktobra 2011 à 8:26
Raha tokony hiala amin'ny fanarahana ny olona mba hahatonga ny Twitter ho “misy dikany sy azo fehezina” kokoa, dia nampiasa lisitra Twitter bebe kokoa aho. Na eo an-toerana ho an'ny Indy ny lisitra, mifandraika amin'ny indostria na koa mba hanamarinana ny vaovao ara-panatanjahantena dia nahatonga azy ireo hamokatra kokoa.
2 Oktobra 2011 à 9:19
Ary angamba tokony ho nanana ny lohateny ianao hoe, "Ny paikadin'ny media sosialy dia omby." Toa mahafinaritra ny miteny ratsy.
4 Oktobra 2011 à 10:11
4 Oktobra 2011 à 11:31
@chuckgose eritreritra tsara momba ny fomba lasa mora kokoa ny mitantana ny fitaovana sosialy miaraka amin'ny fitaovana toy ny lisitra, saingy tsy azo antoka fa hamaha ny olana izany. Raha ny fandehan'ny paikadin'ny haino aman-jery sosialy sy ny famaritana ny sandany – rehefa misolo tena ny marika ianao – dia ny ampahany “sarobidy” no tokony hopotehina ho an'ny olona. Ny famaritana ny dikan'izany sy ny fomba ary ny fotoana maha-zava-dehibe ny votoaty dia ny toerana tsy ahafahan'ny ankamaroan'ny sambo.
4 Okt 2011 amin'ny 1:23 PM
Ekeko tanteraka. Ny hevitr'i @douglaskarr:disqus momba ny tsy fanarahana olona fotsiny no tiako holazaina mba hampihenana ny tabataba. Betsaka ny kaonty arahiko amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny lisitra saingy tsy narahina tamin'ny fomba ofisialy.
26 Novambra 2011 à 4:31
Tsara hoy. Mety ho sarotra ny manohitra ny fanehoan-kevitry ny lohalika amin'ny fampiasana media sosialy hivarotana, hivarotana, hivarotra, saingy saika mihemotra foana izany! Miombon-kevitra amin'ny @chuckgose:disqus ihany koa aho momba ny famoronana lisitry ny Twitter mba hampihenana ny tabataba. Amin'izany fomba izany dia afaka manaraka ny olona rehetra tianao ianao (fampahalalana #smb, vaovao manerantany, fampahalalana momba ny horoscope, anaranao!) Misaotra amin'ny torohevitra Doug!